सेरोफेरो : ‘दुब्ला पातल संघ’
आफू भन्दा उचाइ र वजनले ठूला ठूला विद्यार्थीहरू । गाली गरुँ, थर्काउँ भने पनि आँखा तरेर हेर्लान भन्ने डर । गर्न हुन्थेन, तैपनि कहिले काही एक दुई थप्पड लगाए पनि आफ्नै हातै झननन्न हुने गरि दुख्थ्यो । एक थप्पड हाने पछि आफ्ना दुबै हात पछाडी पारेर मोल्न पथ्र्यो पिडाले । बडप्पन जो थियो शिक्षक हुँ भन्ने, विद्यार्थी बनाउँछु भन्ने । तह लगाउँछु भन्ने ।
धन्न स्कुलले सरमिसहरूका लागि पोशाक छुट्टाइदिएको थियो । नत्र कुनै दिन विद्यार्थीको जस्तै पोशाक लगाएर आउने हो भने हामी दुब्ला पनि बिद्यार्थीमै हराउँथ्यौ. । विहानै विद्यार्थीसँगै लाइन बस्नु पथ्र्यो होला । हाम्रो पनि नंङ र दाँत चेक गरिन्थ्यो । हामीले झै हामीलाई पनि कुनै सरमीसले सातो लिन्थेँ, नंङ नकाटेकोमा । धन्न यस्तो हुन पाएन ।
स्कुलमा लगभग डेढ वर्ष जति अध्ययापन गरेपछि म पढाइको शिलशिलामा राजधानी पसेँ । उमेरसँगै मेरो ज्यानको वजन पनि बढ्न थाल्यो । दुब्ला पातला संघकोे मौखिक विधान अनुसार म सदस्याताबाट अहिले बाहिरिसकेको छु । भण्डारी सर पनि मोटाउनु भयो भन्ने सुनेको छु । राजु सर मोटाउन के नै बाँकी होला र ? सायद अहिले हाम्रो संस्था नै मेटियो होला । तर, मनबाट स्कुलका गुलिया सम्झना भने मेटिन सकेको छैन । मेटिने पनि छैन ।
(2013, Aug/ Kathmandu/Bhabasagar Ghimire)